၂၀၂၀ အတွက် MS Office အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့နှင့်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများ Linux မှ
အရာရာတိုင်းတွင်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမျှမရှိပါ «Sistema Operativo»အရာအားလုံးကအများဆုံးအသုံးပြုသည် အသုံးပြုသူ အများအားဖြင့် «Navegador web» နှင့် «Aplicaciones Ofimáticas»ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် စာသားတည်းဖြတ်သူ, un PDF ဖိုင်ဖတ်သူ သို့မဟုတ်လူသိများ «Suite Ofimáticas»ရုံးများသို့မဟုတ်အိမ်များတွင်နေ့စဉ်အလုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း (ဖန်တီးခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း) ကိုခွင့်ပြုသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များ (အထုပ်) တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသော်လည်း «MS Windows» နှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ «Suite Ofimática»ကိုခေါ် «MS Office»အမှန်တရားကဒီအကြောင်းပါ၊ «Sistema Operativo» အကြောင်း «Distros GNU/Linux» နှင့်အခြားသူများ, များသောအားဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိပါတယ် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းအခြားနည်းလမ်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး အခမဲ့, ရန်လူတိုင်းကအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူရုံးအလုပ်လုပ်ဆောင်.
နှင့်အသစ်သောသင်၏အသစ် ကွန်ပျူတာ ယူလာ «Windows 10» တစ် ဦး စမ်းသပ်ဗားရှင်းနှင့်အတူ Microsoft က Office ကို သင်အကြာတွင်ပင်လယ်ဓားပြဖြေရှင်းမှုဖြင့်ဆက်လက်ဝယ်ယူနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ယူဆောင်လာနိုင်သည် «Mac OS» နှင့် «Suite Ofimática» ငါအလုပ်လုပ်သည်, စံပြaကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ဖို့အမြဲဖြစ်လိမ့်မည် အခမဲ့နှင့်ရုံးဖွင့်ရုံးဖွင့် ဖြစ်နိုင်ရင် ပလက်ဖောင်းများစွာ။
ထို့ကြောင့်၊ လူသိအများဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် «Suite Ofimáticas» ဒီနှစ်ကာလအတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် 2020 များအတွက်အစားထိုးအဖြစ် «MS Office».
1 ၂၀၂၀ အတွက် MS Office အတွက်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
LibreOfficeရှေးအကျဆုံးလူသိများနှင့်အသုံးပြုခဲ့သည် «Suite Ofimática» del GNU / Linux ကမ္ဘာ လက်ရှိနံပါတ်အသုံးပြုပုံဒီရက်စွဲကိုသွားတတ်၏ ဗားရှင်း 6.4.0 beta ကို 1 သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ဌာနခွဲအဘို့, အရေအတွက် 6.3.3 ဗားရှင်း ၎င်း၏တည်ငြိမ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲနှင့်နံပါတ်သည် 6.2.8 ဗားရှင်း သင့်ရဲ့တည်ငြိမ်ဌာနခွဲသည်။ ထိုအဘို့ဗားရှင်းနှင့်အတူ «Windows, Mac OS y Linux» ကွဲပြားခြားနားသော installation ဖိုင်များအတွက်။ ထိုအခါငါယခုပါဝင်သည်မှာအောက်ပါ package များဖြစ်သည်။ ရေး၊ ရေး၊ ရေး၊ ရေး၊ ရေး၊ အခြေနှင့်သင်္ချာ.
"LibreOffice သည်အစွမ်းထက်သည့်ရုံးသုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သန့်ရှင်းသော interface နှင့်အစွမ်းထက်သောကိရိယာများကသင်၏ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။ LibreOffice သည်စျေးကွက်တွင်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ရုံးသုံးအစုံအလင်ပါ ၀ င်သော application များပေါင်းထည့်သည်။ Writer၊ word processor၊ Calc၊ spreadsheet, Impress, တင်ဆက်မှုအယ်ဒီတာ၊ Draw၊ အခြားဒေတာဘေ့စများနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သင်္ချာဖော်မြူလာကိုတည်းဖြတ်ရန်အတွက်သင်္ချာ".
တိုတိုပြောရရင် «Libre Office» ယင်းသည်အခိုင်မာဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် GNU / Linux ကမ္ဘာအလွန်ကောင်းမွန်သော၊ ခေတ်မီ။ ဖော်ရွေသောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့်၊ အတွင်း၌စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲဂေဟစနစ်.
Calligra Suite ၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာကနေတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် «Suite Ofimática» မှတဆင့်ဖြန့်ဝေ compressed ဖိုင်များ (tar.xz) ၎င်းတွင်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ပါရှိသည်၊ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးများ၏ repositories မှအလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သည် «Distros GNU/Linux».
လောလောဆယ်ကအရေအတွက်ကိုအားဖြင့်တတ်၏ 3.1.0 ဗားရှင်း သင့်ရဲ့တည်ငြိမ်ဌာနခွဲနှင့်ဗားရှင်းနံပါတ်သည် ၂ အာလဖ သင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲအတွက် သို့သော်၊ ၎င်းတွင်၎င်းင်း၏တပ်ဆင်ခြင်းဖိုင်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည် «MS Windows» en .msi ပုံစံ ၏ဗားရှင်းများအတွက် 32 နဲ့ 64-bitsနှင့်၎င်းတွင်တပ်ဆင်ရန်ဖိုင်များမရှိပါက «Mac OS» ၎င်းကို Package Manager ကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ် Homebrew.
ဤ «Suite Ofimática» ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် KDE အသိုင်းအဝိုင်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပျှမ်းမျှရုံးခန်း၏ရုံးစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လျှောက်လွှာ ၈ ခုလုံးကိုပေးထားသည်။ စကား, ဇာတ်စင်, စာရွက်, Flow, Kexi, များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သော KDE စီမံကိန်းမှအခြားသူများနှင့်အတူဖြည့်ထားသည် ကာဗွန်နှင့် Kritaပိုပြီး အကြံအစည်.
ဤအရာများထဲမှနှစ် ဦး စလုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံး «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» သား WPS y အခမဲ့ရုံးအနည်းဆုံး 1 ဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည် Linux Distro။ သင်ဤအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်2«Suite Ofimáticas»၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ WPS y အခမဲ့ရုံး.
MS OneDrive (MS Office အွန်လိုင်း)
Polaris Office ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ၂၀၂၀ အတွက် MS Office အတွက်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Benjamin ချီလီ ဟုသူကပြောသည်
Manjaro Linux ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ Linux သုံးစွဲသူဖြစ်သည်။ MS Office (LibreOffice နှင့် KDE suite Caligra) ကိုကျော်လွန်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်နိုင်သောရုံးသုံးကိရိယာတန်ဆာပလာများအကြောင်းသင်၏အစီရင်ခံစာကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်ခဲ့သည်။ 2014 ကတည်းက Manjaro repositories တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသောနှစ်ခုရုံးအလိုအလျောက် packages များနှင့်အတူဤရုံး tools များ။ ပထမတစ်ခုကိုတီထွင်သူနှင့်ထိန်းသိမ်းသူ Vitor Lopes (@codesardine) မှ စုစည်း၍ တပ်ဆင်သည် https://vitorlopes.me/Outlook မှာအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုရှိရင်သင့်ရဲ့ browser မှာ Microsoft Office 365 ကပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ MS-OFFICE-Online လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဒီဇိုင်နာကဒီ app ကို linux အတွက်သူ့ရဲ့ Jade Desktop Environment ထဲကိုပေါင်းထည့်လိုက်တယ်။
ဒုတိယအထုပ်မှာ OnlyOffice ကုမ္ပဏီမှဖြစ်သည်။https://www.onlyoffice.com/es/download-desktop.aspxMsOffice extension ဖိုင်များကို Linux သို့ထောက်ပံ့ရန်အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး app ကို၎င်း၏တိုးချဲ့ထားသော OnlyOffice Docuements Desktop package နှင့်အတူ) ။ Arch Linux, Manjaro, Debian နှင့်အခြားဖြန့်ချိသူများသည်မူရင်း Microsoft system နှင့်လိုက်ဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအကဲဖြတ်မှုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်များတင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းကို Debian / Ubuntu, RPM နှင့် SNAP စသည့် linux ပုံစံများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဘယ် MS Office နဲ့အသင့်တော်ဆုံးလဲ။
ငါကြိုးစားခဲ့သမျှတွင် Microsoft formats နှင့်အဆင်ပြေစွာလိုက်ဖက်သောအရာသည် WPS Office ဖြစ်သည်၊ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ် WPS ကိုသာကြိုးစားပြီးကြည့်သည်။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေလော့။
ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးသော အချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့်အဆင်ပြေသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ သို့သော်အခမဲ့ဗားရှင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောရွေးချယ်စရာများကိုလိုချင်လျှင်၎င်းသည်ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ ငါ LibreOffice ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုရန်သင့်အားငါပြောမည်။ အကယ်၍ သင် Microsoft format နှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါက WPS Office ရှိသည်။
ဤ Office Suite ကိုကျွန်ုပ်မစမ်းသပ်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်၎င်း၏ interface သည် MS Office နှင့်ဆင်တူသည်။ ငါ၏ဖိုင်ဖိုင်ပုံစံများနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုသည်လစာကောင်းသည့်ဗားရှင်းရရှိရန်အလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်မြင်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါ WPS ကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊
Desktop Editors စာစောင်တွင် open source ဖြစ်ပါကသင်မှားနေသည်။
MS Office တွင်ကျွန်ုပ်၏လိုင်စင်ကုန်ဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်၏ရုံးအလိုအလျောက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့် WPS ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ် MS MS ကိုအသုံးပြုသောအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်
Pentras မင်္ဂလာပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံအပေါ်ထည့်သွင်းပြောဆိုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သည့် macros များ၏ဖြစ်ရပ်များသည် MS Office ၏သဟဇာတဖြစ်ပုံရသည်၊ ၎င်းတို့သည်အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်ရှိပါသလားသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုသုံးရန်သင့်တွင် premium package ရှိရမည်လား။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းများစွာသောသူတို့သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးကြပြီးမှန်ကန်သောကိရိယာများသို့မဟုတ်ထပ်တူပြုချက်များမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ် install လိုက်သော wp သည်အင်္ဂလိပ်လိုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံသောစကားလုံးဖြစ်သည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစကားလုံးတစ်ချောင်းသာရှိခဲ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်၎င်းကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီး၎င်းသည်မိုက်ခရိုဆော့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ငါအရာအားလုံးကို opensuse ထဲမှာစမ်းပြီးပြီ၊ ငါသုံးတဲ့ distro၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ဥပမာ၊ ဝိုင်ထည့်ပြီးစကားလုံးတစ်လုံးတပ်ဖို့ရွေးလိုက်တာကဟောင်းနွမ်းနေရင်တောင်။ ငါ့အတွက်စာရေးဆရာများအတွက်အဓိကကျသောအချက်မှာ synonyms ၏အသုံးဝင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် lexical richness နှင့် free office နှင့်အတူရေးရန်အခြေခံအရာရှိသည်၊ သို့သော်မလုံလောက်သော၊ ညံ့ဖျင်းစွာရေးသားထားသော၊ အမှားများနှင့်၊ အသုံးများသောရွေးချယ်မှုများမပါ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာငါသူတို့တွေရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့အဘိဓာန်တွေပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းဖို့ libre ရုံးစီမံကိန်းကိုအီးမေးလ်တစောင်ရေးခဲ့တယ်။ ၎င်းတို့သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးစပိန်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်သီးခြားဒေါင်းလုပ်ရယူရန်နှင့် interface သို့မည်သို့ decompress နှင့်မည်သို့ပေါင်းစည်းရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထို့နောက်အဓိပ္ပာယ်များသည်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အရာများ၌စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်ပြီးသူတို့ပြောသောစကားလုံးအနည်းငယ်သည်လုံလောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပြောသောစကားလုံးများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ အကယ်၍ သူတို့ကသင့်တော်တဲ့ thesaurus လုပ်ရင်ငါ windows တွေကိုဘယ်တော့မှမထိတော့ပဲငါရေးဖို့ငါသုံးတဲ့အဓိကကွန်ပျူတာပေါ်မှာ open suse ကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတွေပြောတာက synonyms ကိုသုံးစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။
rafael casares အားပြန်ကြားပါ
ရာဖေးလ်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ LibreOffice နှင့်အခြား Office Suites များကင်းမဲ့သော Thesaurus အကြောင်းကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝသဘောတူသည်။ အရေးအသားကိုအထူးကြပ်မတ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုပြုလုပ်သောငါတို့အတွက်၎င်းသည်မဖြေရှင်းနိုင်သောအချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကြွယ်ဝသောမှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက် linux ၌ရုံးသုံးအလိုအလျောက်အစုံလိုက်သုံးစုံပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် WPS Office၊ OnlyOffice (MS Office စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အပေါ့ဆုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့်တစ်ခု) နှင့် Free Office တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင် Office3နှင့် 2010 နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ငါ၏အစာရွက်စာတမ်းများရေးသားခြင်း၏အချိန်။ Only နှင့် Free Office တို့၏အားသာချက်များအနက်တစ်ခုမှာသူတို့၏ interface သည်စပိန်ဘာသာဖြစ်သည်။ WPS Office interface interface အတွက်အနည်းငယ်ကုန်ကျသည်။
Luis E ကိုပြန်ပြောပါ
Ubuntu တိုးတက်ရန် Canonical သည်သင်၏အကူအညီလိုအပ်သည်
Stack Overflow တွင်အသုံးများဆုံး Java code snippet တွင်အမှားတစ်ခုပါရှိသည်